ဧရာဝတီ - ရုပ်/သံ: An Interview wiht "Hnyo" Magazine Editor
An Interview wiht "Hnyo" Magazine Editor
I really support this guy! He is the first one to challenge the traditional notion of what Burmese Culture mean, we need to start developing market-friendly practises in every aspect in order to promote individual freedom! Keep Moving Forward, we need more progressive people like you sir! Thumbs Up!
ma oo said...
စနှစ်မပြောင်းခင်မှာ စာနယ်ဇင်းလောက ခြေတလှမ်းရှေ့ရောက်နေလို့ပါ။မကြာခင် ဖြစ်တည်လာမယ်လို့ ယုံကြည်မိနေပါတယ်။ယခင်က..ဇော်ဝမ်းရဲ့စတီရီယိုသီချင်းဖြစ်တဲ့ ကျော်ခဲသီချင်းသံစဉ်..စာသားတွေနားထောင်စဉ်က ဘုကလန့်ကြီးလိုနားဆင်မိသလိုပေါ့နော်..ယခုလဲ ဒီလိုဖြစ်တာပါဘဲ။အပြောင်းအလဲဆိုတာ ...